जातजाती र समुदायमा घृणा फैलाउने नेता र अधिकारकर्मीदेखि सावधान, गलत ग्रुपको रगत दिएपछि गंगालालमा बालिकाको मृत्यु । ट्राफिक घुस काण्ड ! भिडियो हेर्नुहोस « BBCeonlinenews
जातजाती र समुदायमा घृणा फैलाउने नेता र अधिकारकर्मीदेखि सावधान, गलत ग्रुपको रगत दिएपछि गंगालालमा बालिकाको मृत्यु । ट्राफिक घुस काण्ड ! भिडियो हेर्नुहोस
‘बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई सम्मान गर्न सकियो भने सामाजिक सद्भाव बलियो बन्छ’
बहुसंख्यकहरुले अल्पसंख्यकलाई सम्मान गर्न सकियो भने सामाजिक सद्भाव बलियो बन्छ । राजनीतिज्ञहरु त आफ्नो स्वार्थका लागि लड्छन्, फुट्छन्, जुट्छन् । स्वार्थ मिले हाईहाई नमिले बाईबाई । पद र शक्तिका लागि मात्र राजनीति गर्नेहरु, शिरमा राखेकाहरुलाई एक मिनेटमा पैतलामा पु¥याउँछन् र पैतालाले किचेर राखेकालाई एक मिनेटमा शिरको ताज बनाउँछन् ।
एकै पटक सबै वा धेरै जनताको मन जित्न नसक्ने भएपछि क्षेत्र जाती र समुदाय उचाल्न तिर लाग्दछन् । देशको भलो चिताउने नाममा आाफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहनेहरुको हुलले यो मुलुकको सदुभावमा ठूउलो आँच आएको छ । जात जाती मिलेर बसेको समाजमा कुरीति व्याप्त थिए र छन् पनि । सद्भावमा आँच नआउने गरी विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयास गरिनुको साटो मुलुकमा एकै चोटी घृणाको राजनीति गर्ने प्रयास भयो । फलस्वरुप नाकको चुच्याई र थेप्च्याईका आधारमा मुद्धाहरु चल्न शुरु भए ।
जनताले आफ्नो विवेक गुमाएका छैनन् र मात्रै हो, नत्र घृणाको बिष समाजमा छरेर आँफूलाई यो समुदायको नेता वा यो जातीको तारणहार बनाउँदै राजनीति गर्न धेरैले कम्मर कसे । बर्षौ विभेदमा परेका जनताले रगत उम्लिने भाषण सुने । सोझा–साझा जनतालाई एक छेउ पनि शंका भएन कि विभेदको अन्त्य गर्छु, अधिकार दिलाइदिन्छु, गरिबी समाप्त पार्छु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबै दिन्छु भन्नेहरुले गरेको रगत उम्लिने भाषणले भाषण गर्नेको मात्रै जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो ।
समाजमा विभेद अझै कायम छ, त्यसको अन्त्य घृणा पैmलाएर हुनै सक्दैन । शिक्षा, चेतना विना सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न कानूनले मात्र सक्दैन । पढेलेखेकाहरुबाट नै सबै भन्दा बढी विभेद हुने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन् । हामी वेबकुफ भयौ भने हाम्रो बेबकुफिमा टेकेर एउटा हैसियत नभएको टापटिपे नेताले राजनीति गर्छ, चुनाव जित्छ र देश लुट्ने सान्दार लाइसेन्स पाउँछ ।
यो त राजनीति गर्नेको अचुक फर्मूला हो कि शोषित, पीडित, दलित, जनजाती, महिला, सीमान्तकृतका नाममा जति ठूलो नारा लगायो त्यति ठूलो नेता बन्न पाइन्छ । कमाई खाने पनि यति ठूलो भाँडोलाई अन्त्य गर्नु भन्दा अझ बढी यस्ता मुद्धा उचाल्न आज भोलि सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताहरु नै खटिएका छन् । तिनले समाजमा विष घोल्ने काम गर्छन् । क्षेत्री, बाहुनको फेक आइडी बनाएर, नेवारलाई, तामाङलाई, राई, लिम्बु, शेर्पा, गुरुङ मगर लगायतका जाती समुदायलाई होच्याएर निचो देखाएर, गिराएर, रगत उम्लने गरी गाली गलौज र बहस गर्छ । यस्तो देखेपछि कसको चित्त दुख्दैन ।
स्वाभावले नै सोझा र केहीलाई छोडेर लप्पन छप्पन नजान्ने यो समुदायका साथीहरु बाहुन, क्षेत्रीलाई गाली गलौज गर्न शुरु गर्नु हुन्छ, तँलाई काट्टो खाने, टपरे बाहुनहरु । सेम यस्तै मधेसी र पहाडी भनेर फाइदा लिन लागि परेकाहरुले खटाएकाहरु पनि समाज विथोल्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।
तुलनात्मकरुपमा तराई मधेशले सम्बवतः सवै भन्दा धेरै विभेद खेप्नुप¥यो र अझै पनि यस क्षेत्रमा विभेद कायम नै छ । मधेशको अशिक्षा, गरिबी, रोग शोक, धेरैको माथि चड्ने भ¥याङ हो र जबसम्म यो बेचेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउनेहरुको दुकान बन्द हुँदैन, मधेशको विभेद जाँदैन । जाँदैन हैन, यिनले जान दिदैनन् । मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहज भयो भने के भनेर राजनीति गर्ने ?
त्यसैले केही सिरियस मधेशवादी नेताहरुलाई छोडेर बाँकीको सटर बन्द हुने भएकोले जानाजान यो विभेद अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छैन । यो मुद्धालाई मलजल गर्न, आफ्नै देशका नागरिकलाई तिनको कालो वर्ण, तिनको पहिरन र स्थानीय भाषाको आधारमा भारतीय भनेर हेपेर कसैले लेखिदिन्छ ।
त्यसको प्रतिकारमा अर्कोले पहाडीलाई शरणार्थी भनेर लेखिदिन्छ । बेकारमा घृणा पैदा गराएर एउटा समुदाय, क्षेत्र वा जातीको मात्र मन जित्न लागीपरेकाहरुबाट हामी सबैले बच्नु पर्छ । जाती विशेष, समुदाय बिशेषलाई घृणा गरेर सामाजिक सञ्जालमा कसैले पनि आँफूलाई अभिव्यक्त गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा समूहको पोष्टमा कमेन्टहरु लेखेर वा त्यसलाई शेयर गरेर त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई सामाजिक सद्भाव विथोल्न सहयोग नगरौ ।
अधिकांश केशमा त्यस्ता आइडीहरु नक्कली हुन्छन् । एक अर्काको रगत उमाल्न, गाली बेइज्जती गराउन, जाती समुदायबीच घृणा पैदा गराउन कसैले पैसा दिएर सञ्चालन गरेका मानिसहरु सामाजिक सजालमा सक्रिय छन् । यो जाती, उ जाती, यो समुदाय उ समुदाय होइन । हरेक जात जाती र समुदायमा ृणा फैलाएर यो समाजलाई अस्थिर बनाउनेलाई नसघाउ ।
सचेत हामी हुने हो । पहाडे मुलका अर्धबैशे व्यापारीलाई हाम्रो केटाकेटीहरु दाइ वा अंकल भनेर सम्बोधन गर्छन् । तर त्यही ठाँउमा मधेशी मुलका वृद्ध मानिसलाई ओ भैया भनेर हाम्रै केटाकेटी बोलाइ रहेका हुन्छन् । यो सब देखेर तपाई केही बोल्नु हुन्न भने तपाई एक ठूलो विभेदकारी मानिस हो ।
उहाँलाई पनि बुबा, अंकल वा दाई भन्न लगाउनुस्, मानेन भने सिकाउनलाई उस्तै परे २÷४ पटक कान समेत निमोठ्नु पर्छ । ताकी उसले कहिल्यै विभेद नगरोस् । समाज तपाई हाम्रो हो, नेता जाबो कति आए कति गए । सचेत हामी हुने हो ।
दलित, जनजाती, महिला, आदिका अधिकारका नाममा दशकौँ राजनीति गर्नेहरुले घर भरी अवार्ड, पासर्पोट भरी भिषा र खाताभरी डलर थुपारेका छन् । अनि धर्मको राजनीति गर्नेहरुको झन के कुरा ।
आफूलाई ठूलै जातको भन्नेहरु पनि छन् जसको जीउमा जनै छैन, एउटा मन्त्र पढ्न आउँदैन, कुखुरा, हाँस, खशी, माछा, सुंगुर, वंगुर, राँगो, भैसी कुनै दिन नछोडी अटुट आको बात छैन भन्दै प्रत्येक दिन जाँडको घ्याम्पोमा बसेर ठ्वास्स गनाउनेलाई पनि यहाँ धर्मको राजनीति गर्नु परेको छ ।
कसैको उक्साहटमा नलागी हरेक धर्मावलम्बी, जातजाती र समुदाय बीचमा भाइचारा कायम गर्ने काम हाम्रो हो । एकै पटक सारा जनताको मन जित्न सम्भव नभएपछि सानो सानो झुण्डको मन जित्न हिडेका हरुवा नेतादेखि सावधान !
सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कुम्लाएर अझै गरिबको झुपडीमा अधिकारको नाममा विभेद झोस्न ङिच्च हाँस्दै नमस्कार गर्दै आइपुग्लान होसियार रहनुहोला । र अन्त्यमा आज हिन्दुहरुको अक्षेय त्रितियासँगै नेपालका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको ठूलो चाड रमजान पनि आज सुरु भएको छ ।
देश विदेशमा बसेर हामीलाई हेर्नुहुने इस्लाम धर्मावलम्बी सम्पूर्ण दर्शकहरुमा रमजान–उल मुबारक ।